Runtopia - Run ကို & လမ်းလျှောက်များအတွက်ဆုလာဘ်များ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » Runtopia - Run ကို & လမ်းလျှောက်, Fit ခန္ဓာကိုယ်, 10K Run ကိုများအတွက်ဆုလာဘ်များ
Runtopia - Run ကို & လမ်းလျှောက်, Fit ခန္ဓာကိုယ်, 10K Run ကို APK ကိုများအတွက်ဆုလာဘ်များ
🔥Runtopiaသို့သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသို့ပြောင်းလဲရန်စိတ်ခွန်အားနိုးမက်လုံးပေးပေးသည် အားကစားဒင်္ဂါးပြား:ထို့နောက်အဘို့လဲလှယ်နိုင်သည့်💰c, အခမဲ့ထုတ်ကုန်:, Paypal ငွေသားဆုများ, Samsung ရဲ့ Galaxy S9 အမျိုးမျိုးကြံ့ခိုင်ရေးဂီယာနှင့်ပိုပြီးကဲ့သို့သော! သင်တစ်ဦးအစပြုသူသို့မဟုတ်မာရသွန်အပြေးသမားသို့မဟုတ်ပင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ရည်ရွယ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, Runtopia သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန် tools တွေကိုရှိပါတယ်!
🎉Runtopiaလည်းသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုထိရောက်စေရန်အင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် လှုံ့ဆော်မှုစောင့်ရှောက်: :
1 ။ မှတ်တမ်းများအကွာအဝေး, အရှိန်အဟုန်, ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်အားလုံးကို real-time running ဒေတာ။
2 ။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုထိရောက်စေရန် Professional က Real-time အသံလမ်းညွှန်မှု။
3 ။ တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကို; တစ်ပြေးအစပြုသူ, 5k ပြေးသမား, 10k ပြေးသမားတဝက်မာရသွန်အပြေးသမား, မာရသွန်အပြေးသမား, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ, သင်သင့်လျော်မည့်အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
4 ။ လမ်းတစ်လျှောက်ကိုသင်လှုံ့ဆျောကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးကိုကနေမိတ်ဆွေသန်းပေါင်းများစွာ၏လူမှုရေးပြေးအသိုင်းအဝိုင်း။ သင့်ရဲ့ပုံပြင်များဖလှယ်ခြင်းနှင့်မှုတ်သွင်းရ။
5 ။ ဦးဆောင်သူအပြေး; ပိုပြီးပျော်စရာအပြေးစေနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်။
6 ။ အခမဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်လဲလှယ်ခံရဖို့မရရှိနိုင်ကမ်းလှမ်းမှုအများကြီး; paypal ငွေသားဆုများ, သင့်နေ့စဉ်ခြေလှမ်းများကတဆင့်ရရှိခဲ့သည်ခံရဖို့ Apple က iWatch ကို Samsung က Galaxy S9 နှင့်ပိုပြီး။
7 ။ သငျသညျပိုမြန်အားကစားဒင်္ဂါးပြားရကူညီဖို့ပျော်စရာကြံ့ခိုင်ရေးတာဝန်များကို။ ပိုငျသညျလေ့ကျင့်ခန်း, သငျသညျအရပိုမိုဒင်္ဂါးပြား။
8 ။ Awesome ကိုတံဆိပ် system ကို; သင်တစ်ဦးစံချိန်သို့မဟုတ်အောင်မြင်မှုကိုချိုးဖျက်အခါတိုင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ဆုချပါလိမ့်မယ်။
အပြေးတာဝန်များကိုဖြည့်ခြင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာအကြွေစေ့နှင့်သင်၏ခြေလှမ်းခြေရာခံများကပိုက်ဆံလုပ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအသုံးပြုရန်: Samsung ရဲ့ Galaxy S9 ဖုန်းကို Apple က iWatch, PayPal ကငွေသား, ကြံ့ခိုင်ရေးဂီယာနှင့်ပိုပြီး။ အဆိုပါ, သင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုပိုမိုမြန်ဆန်သင်သည်သင်၏ဆုလာဘ်ရပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အညီ, အားလုံးအခမဲ့ပါ။
ကျနော်တို့ရွှေ့ဖို့လူတိုင်းကိုအားပေးအားကစားဒင်္ဂါးပြားကိုသုံးပါ။ သငျသညျအပြေးသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိ, သင်ခြေလှမ်းများကတဆင့်အားကစားဒင်္ဂါးပြားတွေနေ့တိုင်းကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပိုငျသညျ, သငျသညျစုပြုံပါလိမ့်မယ်ပိုသင့်ရဲ့အားကစားဆိုင်ရာဒင်္ဂါးပြားကိုလေ့ကျင့်။ Runtopia ရဲ့ရည်မှန်းချက်လူတိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးခံစားရန်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။
အပြေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး: အဆိုပါ Runtopia အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်တကွ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်းရာပေါင်းများစွာထဲကနေအပြေးသမားကိုအတူတကွတတ်၏။ သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပါ, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အားပေးနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ပါစေ။ သငျသညျအထီးကျန်သို့မဟုတ်သွက်ခံစားရပဲဖြစ်ဖြစ်, Runtopia သငျနှငျ့အတူတလျှောက်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်။
စမတ် devices များဘက်စုံဒေတာ:📈
သင့်ရဲ့ပြေးပုံစံနှင့်အရှိန်အဟုန်ဖိနပ် running အသံနည်းပြများနှင့် Runtopia ရောကျနှင့်အတူတိုးတက်ကောင်းမွန်လာ; သင့်ရဲ့အကွာအဝေး, အရှိန်အဟုန်, အမြန်နှုန်းကိုခြေရာခံ, ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ခြင်း, အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်အားလုံး။ ဒီ app ကို Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးစလုံးကို devices တွေကိုထောက်ခံပါတယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Garmin နှင့် TomTom ကဲ့သို့သောအခြား GPS စနစ်ကိရိယာမှဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပြီးမြောက်ကိုကူညီသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပါ။
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတာဝန်များကို, ရေးရာအွန်လိုင်းလူမျိုးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်အသရေအဆင့်ဆင့်ကိုသင်အပြည့်အဝလည်ပတ်နေနှင့်ကျင့်သုံးခံစားရန်ခွင့်ပြုဆုခခြံနေကြသည်။ 1KM ကနေအပြည့်အဝမာရသွန်ဖို့, ရှိသမျှအပြေးသမားကိုက်ညီရန်အဖြစ်ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းပြေးဖြစ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်! သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာမထိုက်မတန်ခန္ဓာကိုယ်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်သည်လည်းငါတို့ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
👉Runtopiaသငျသညျအပြေးဖို့ကျူးလွန်သည်တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်း & မီးလောင်သောကယ်လိုရီ၏ခံစားချက်ကိုခံစားနှင့်သင်ကျန်းမာခြုံငုံစေ။ ကျနော်တို့သင်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အလေ့အထဖွံ့ဖြိုးနှင့်လေးရယ်မှစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုခံစားဖို့ကူညီပေးဖို့, ထွက်အလုပ်လုပ်ထံမှငွေရှာနိုင်ပါတယ်ရှိရာကြံ့ခိုင်ရေး incentivized ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ခရီးစတင်အသင့်ဖြစ်ပြီလား? ကျနော်တို့ Runtopia မှာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်! 💖💖💥
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/blastrunning/
1 ။ Runtopia လုံးဝအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်! ပိုမိုလွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့ပြေးဒေတာ, အပြေးသမားအဆင့်ဆင့်နှင့်အောင်မြင်မှုများ View! သေးငယ်တဲ့ရည်မှန်းချက် ထား. , ပြောင်းရွှေ့ရ!
2.Find နှင့်ထောက်ခံစမတ် devices တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှပိုမိုလွယ်ကူစွာသင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေချိတ်ဆက်ပါ။ Runtopia ပိုပြီးအသိဉာဏ်ပစ္စည်းကိရိယာများတိုးတက်နှင့်ပိုပြီး Third-party ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ဒါညှိနေဖို့ဆက်လက်လိမ့်မည်!
အချို့သော bug တွေ 3.Fixed
Runtopia - Run ကို & လမ်းလျှောက်, Fit ခန္ဓာကိုယ်, 10K Run ကိုများအတွက်ဆုလာဘ်များ
31.61 ကို MB
Codoon Inc က
Nike က Run ကိုကလပ်
ကို run Freeletics
ရိုးရှင်းသော Fax အခမဲ့စာမျက်နှာ - ဖုန်းမှဖက်စ်ကိုပေးပို့ပါ